नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य कति फरक छ ? – Jagaran Nepal
नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य कति फरक छ ?
काठमाडौँ, ३० जेठ । सुनको मूल्य कीर्तिमानी स्तरतर्फ उक्लिन थालेको छ। बिहीबारका लागि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको भाउ तोलाको ८९ हजार ६ सय तोकेको छ भने नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले ८९ हजार ७ सय तोकेको छ ।
केही महिनायता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको भाउ उतारचढावमा देखिन्छ। पछिल्लो दुई महिनाको व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य प्रतिऔंश १६७६ डलरदेखि १७४६ डलरसम्म पुगेको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।